ट्याप्स | Martech Zone
ब्रान्डेमोनियम | अक्टोबर -6-,, २०२१ | भर्चुअल सम्मेलन
सोमवार, मे 28, 2007 बुधबार, जुलाई 4, 2007 Douglas Karr
आज संयुक्त राज्यमा मेमोरियल डे छ। मेमोरियल डे एक दिन हो जहाँ हामी हामी स्वीकार गर्दछौं जसले हाम्रो लागि अन्तिम मूल्य तिर्नुभयो। हाम्रा मृतलाई सम्मान गर्नु भनेको युद्धको पुष्टिकरण होइन, बरु यसले उनीहरूलाई सम्मान प्रदान गर्दछ जुन आफ्ना साथी र परिवारमा कहिल्यै आएन।
धेरै व्यक्तिहरूले Veterans Day लाई मेमोरियल डेका साथ भ्रमित गर्दछन् ... दुई धेरै फरक छन्। दिग्गज दिवसले वेटरनहरूलाई जीवित वा मृत सम्मान गर्दछन्, जसले उनीहरूको देशको सेवा गर्ने क्रममा लडेका वा कहिले पनि गर्नुपर्दैन। मेमोरियल डे लडने र मरेकाहरूको लागि हो।
कथाको रूपमा जाँदा, जनरल बटरफील्डले बुझाएको लाइट्स बोलाउँदा खुशी भएन, किनभने यो कल एकदमै औपचारिक थियो जस्तो लाग्यो कि यो दिनको अन्त्य भयो र ब्रिगेड बुग्लरको सहयोगमा ओलिभर विलकोक्स नोर्टनले (१ 1839 1920 -XNUMX -१ XNUMX २०), ट्याप्स लेखे सात दिनको लडाई पछी भर्जिनियाको ह्यारिसन ल्यान्डि atमा शिविरमा रहेका आफ्ना मानिसहरूलाई सम्मान गर्न।
यी लडाईहरू १ 1862२ को प्रायद्वीपीय अभियानको दौडान भएको थियो। यो नयाँ आह्वान जुलाई १ 1862 that night को त्यो रात युनियन सेनाका अन्य इकाइहरूमा फैलियो र कन्फेडेरेट्सले पनि यो कथित रूपमा प्रयोग गरेको थियो। युद्धपछि ट्याप्सलाई आधिकारिक बुगल कल गरिएको थियो।
ट्याप्स बुगलर वेबसाइटबाट।
[अडियो: https: //martech.zone/wp-content/uploads/2007/05/taps.mp3]
ट्याप्स मूल थिएन, यो सम्भवतः यस्तै बुगल कलबाट लेखिएको थियो, ट्याटू भनिन्छ, जुन सैनिकहरूले दिन समाप्त हुने र निद्रा लिन आउनु भन्दा एक घण्टा अघि खेलाइएको थियो। केही व्यक्तिहरूले यो पनि बुझ्दैनन् कि शब्दहरू ट्याप्समा लेखिएको थियो, हाम्रो पतित भाइबहिनीहरूको सम्मानमा बजाइएको सुन्दर तर भूतिया बुगल कल:
दिन समाप्त भयो, सूर्य गए,
सबै ठीक छ, सुरक्षित आराम,
प्रकाश फिक्का; र टाढा
दिन गएको छ, र ताराहरु
राम्रोसँग तिमीलाई बचाऊ। दिन गयो,
धन्यवाद र प्रशंसा, हाम्रो दिन को लागी,
'सूर्य नेथ, न्याथ ताराहरू,
हामी जाँदा, यो हामीलाई थाहा छ,
आज पनि २ 25 औं वार्षिकोत्सव हो भियतनाम भेटरनको स्मारक.
Douglas Karr Monday, May 28, 2007 Wednesday, July 4, 2007
प्लाक्सो अल्फा पूर्वावलोकन
मई 28, 2007 मा 11: 32 एएम
के तपाईंले याद गर्नुभयो कि गुगलले यस बर्षे बर्षेलीहरूलाई शाफ्ट दिए र एक शैलीकृत मेमोरियल डे लोगो दिएनन्? तिनीहरू पृथ्वी दिवसदेखि स्वतन्त्रता दिवस सम्म सबै चीजको सम्मान गर्छन्, तर किन गुगलले भेटाहरू मन पराउँदैन?
मई 29, 2007 मा 11: 46 एएम
त्यो रमाईलो छ - मैले यो पहिले कहिल्यै याद गरेन। मलाई आशा छ कि यो प्रमेडेटेड केहि छैन। कमसेकम केही घाँसमा लगाइएको राम्रो अमेरिकी ध्वज राम्रो हुनेछ। तिनीहरूले कथित रूपमा क्यानाडामा सम्झना दिवसको लागि लोगो राखे जुन यसमा पपीहरू थिए, तर यहाँ केहि छैन।
चाखलाग्दो कुरा, अल गोर तिनीहरूको बोर्डमा छन्। हुनसक्छ त्यसले हाम्रो पतित नायकहरूसँग उनीहरूसँग कुराकानी गरेर समर्थन गर्दछ।